July Dream: If this was vice versa
မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေအဆင်မပြေဘူးလို့ တွေးနေရင် အသက်တိုလိမ့်မယ်။ ဘာတွေဖြင့် အဆင်ပြေလိုက်တာလို့ ရှာကြံတွေးပေးရတယ်။
ကလူသစ် ကွန်မန့်ဖတ်ပြီး ဘာတွေဖြင့် အဆင်ပြေလိုက်တာလို့ ပြောရမလဲ ရှာကြံတွေးနေတာ ခု ရပြီ။
အလှပြင်ဆိုင်သွားရတာ၊ ဆံပင်ညှပ်ရတာ၊ ခေါင်းလျှော်ရတာ အတော်အဆင်ပြေတယ်။ ဒီနဲ့ယှဉ်ရင် အများကြီး အကုန်အကျ သက်သာတာ။
သာမန်ကောင်းမှုလောက်ပဲ လုပ်ရင် စိတ်အနှောင့်အယှက် (မရှိသလောက်) ကင်း၊ သာမန်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ အမှုကို လုပ်ရင် ခုန အဆင့်ထက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာ ပိုရှိလာမယ်၊ ဒီထက် ဒီထက် ပိုကောင်းတာ လုပ်လာရင် ဒီထက် ဒီထက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာ ပိုရှိလာမယ်။
ဒီတော့ အဲဒီလို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာကြုံရတဲ့ ကိစ္စတွေက ကိုယ့်ကောင်းမှုလုပ်ရပ်အဆင့်အတန်းအတွက် မှတ်ကျောက်လို ဖြစ်မှာပေါ့။
မှတ်ကျောက်တင် ခံရဖို့ အစမ်းသပ်ခံလိုက်ပါလေ။
(မှတ်ချက်။ ကိုယ်တိုင် မကြုံရလို့ ပြောနိုင်တာ)
မြန်မာပြည်ကတော့ ဒီလိုပဲ ကိုJuly Dream ရေ. . . အပေါ်ကပြောသလိုပဲ အဆင်ပြေတာလေးတွေ ရွေးတွေးပြီးနေရတာပေ့ါ.
စလုံးကိုရောက်ရောက်ချင်း.. ကျောင်းမှာ Blood Donation Drive လုပ်တယ်...
အဲ့မှာ ပထမဆုံးတခါသွေးလှူဖြစ်တယ်။ အဲ့တာကို ဒီက အဒေါ်က စေတနာတွေမတရားပိုပြီး အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ပြောတယ်။ ဘာတွေ ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲတော့ မသိ.. နောက်တရက်မှာပဲ မာမား လားရှိူးကဖုန်းဆက်တယ်..
သမီးရယ် ဘာလို့သွေးသွားလှူတာလဲ..ပိုက်ဆံမရှိလို့လား.. ကျန်းမာရေးရောကောင်းရဲ့လား.. ပိုက်ဆံမလောက်ရင်ပြော ပို့မှာပေါ့.... ပလာ ပလား ပလားးးး.. မနည်းရှင်းပြရတယ် ပိုက်ဆံအတွက် သွေးတွေထုတ်နေတာမဟုတ်ကြောင်း.. လူ့အသက်ကယ်ဖို့ဖြစ်ကြောင်း.. ဘာတပြား တချပ်မှ လိုချင်လို့မဟုတ်ကြောင်း...
ကဲ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမလဲ အဲ့လို အယူအဆတွေ အတွေးတွေ အတွက်.. ခက်တယ် ခက်တယ်